Thomson ဗွီဒီယိုကွန်ယက်များသည် Ultra HD ဝန်ဆောင်မှုကိုအီတလီ၏ ဦး ဆောင် OTT ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ CHILI ကိုခွင့်ပြု | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်က Ultra HD ဝန်ဆောင်မှုစတင်ရန်ဖို့ငရုတ်သီး, အီတလီရဲ့ဦးဆောင် OTT Service Provider, ဖွင့်မည်
ငရုတ်သီးသွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် '' အဖော် NexGuard မှစ. အကြောင်းအရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အတူအင်တာနက်ကို-ချိတ်ဆက်မျက်နှာပြင်ဖော်ပြပေး UHD, Movies များနှင့်တီဗီကယ်ယူမှ Vibe VS7000 ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာဖြန့်ချထား
RENNES, ပြင်သစ် - မေလ 27, 2015 - သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်ငရုတ်သီး, ရုပ်ရှင်နဲ့ TV ဇာတ်လမ်းတွဲ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြန့်ဖြူးမှုအတွက်ဝန်ကြီးချုပ်လွတ်လပ်သောအီတလီပံ့ပိုးပေး, ပရီမီယံကယ်နှုတ်တော်မူရန်အ Vibe (R) VS7000 Multi-screen နှင့် HEVC encoding ကပလက်ဖောင်းသုံးပြီးကြောင်းယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် ယင်း၏ Pay ကိုတီဗီရုပ်ရှင်ဝန်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်းမှတဆင့် HEVC 4K အကြောင်းအရာ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ငရုတ်သီး NexGuard တစ် Civolution ကုမ္ပဏီနှင့်သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်နည်းပညာမိတ်ဖက်ထံမှရေမှတ်နည်းပညာကို အသုံးပြု. အကြောင်းအရာကာကွယ်သည်။
အီတလီ, ပိုလန်, သြစတြီးယား, ဂျာမနီနှင့်ဗြိတိန်၌ထုတ်လှိမ့်ထားပြီဖြစ်သောငရုတ်သီး, မျိုးစုံပစ္စည်းတွေကနေတဆင့် VOD ရုပ်ရှင်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ရောင်း-မှတဆင့်အကြောင်းအရာပေးပါသည်။
တစ်ဦးကိုကမ်းလှမ်းဖို့ငရုတ်သီး enabled အဆိုပါ Vibe VS7000 နှင့် NexGuard လွှဗီဒီယိုကိုရေမှတ် က Ultra HD ပရီမီယံကဗီဒီယိုအရည်အသွေးနှင့် UHD အကြောင်းအရာကာကွယ်မှုများအတွက် MovieLabs သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူအပြည့်အဝလိုက်နာကယ်တင်ကြောင်းဝန်ဆောင်မှု။ ယခုအသစ် က Ultra HD ဝန်ဆောင်မှုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 460,000 စားသုံးသူထက်ပိုမိုရောက်ရှိရာငရုတ်သီးရဲ့ online streaming ဝန်ဆောင်မှု, တစ်ခုထို့အပြင်အဖြစ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ငရုတ်သီးက၎င်း၏အသစ်ကဖွင့်လှစ် က Ultra HD မေလနှောင်းပိုင်းတွင်ဝန်ဆောင်မှု။
"အမျှ က Ultra HD ဖန်သားပြင်ဈေးလှမျးမိုးပြံ့နှံ့စတင်, သူတို့ကိုဖြည့်ဖို့အကြောင်းအရာ 4K အဘို့ သာ. ကြီးနှင့်ပိုမိုဝယ်လိုအားလည်းမရှိ။ အရပျ၌စနစ်တစ်ခုချပြီးငါတို့ကိုကယ်ယူနိုင်တယ် က Ultra HD ကအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံးကအင်တာနက်-connected devices တွေကိုမှရုပ်ရှင်နှင့်တီဗီစီးရီးကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှအရေးပါဖြစ်ပါတယ် "ဟုစတီဖာနို Flamia, ငရုတ်သီးအကြီးအကဲနည်းပညာအရာရှိကပြောသည်။ HEVC, MPEG-Dash နှင့် CENC - - ဒါဟာနောက်ဆုံးပေါ်ဖွင့်နည်းပညာအားလုံးပေါင်းစပ်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "ကျနော်တို့ Vibe VS7000 အန်ကုဒ်ကို ရွေးချယ်. များအတွက် က Ultra HD ဖြန့်ဝေ။ Civolution မှ session-based ရေစာနှင့်အတူပေါင်းလိုက်သောအခါစနစ်ငါတို့တည်ဆောက်ရန်အရာပေါ်တွင်စုံလင်သောအခြေခံအုတ်မြစ်ပေးသည် က Ultra HD န်ဆောင်မှု။ "
အဆိုပါ MediaFlexOS ဗီဒီယိုကို operating system ကိုတို့က Powered, အ Vibe VS7000 တိုင်းမျက်နှာပြင် (R) မဟာဗျူဟာ, Cloud အရင်းအမြစ်များကို leverages တစ်ခု All-လွှမ်းခြုံကဗီဒီယိုအခြေခံအဆောက်အဦအဖြစ်ပေး On-ဝုဏ်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲနောက်ကွယ်မှာသွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်အတွက်သော့ချက်အစိတ်အပိုင်း '' ဖြစ်ပါသည် အမြင့်ဆုံးသောဗီဒီယိုအရည်အသွေးနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုနိမ့်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်။ MediaFlexOS ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, On-ဝုဏ်အတွင်းသယံဇာတအရင်းအမြစ်များအပြင်, မိုဃ်းတိမ်နှင့် virtualized ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်တိုက်ရိုက် transcoding, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အခြားတစ်ဦးက / V ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖွသော Vibe VS7000 များအတွက် software ကိုအလွှာကိုပေးပါသည်။ MediaFlexOS အဆိုပါ Vibe VS7000, ဆာဗာတစ်ခုစပျစ်သီးပြွတ်ဖန်တီးအော်တိုဝန် balancing နှင့် failover စီမံခန့်ခွဲခြင်း, အသစ်သောဆော့ဖ်ဝဲကို၎င်း module ပေါင်းစည်းမှုရိုးရှင်းဖို့နိုင်ပါတယ်။
"သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုမှပထမဦးဆုံး OTT စနစ်များကိုပံ့ပိုးပေးတစ်ခုဖြစ်သည် က Ultra HD အဆိုပါ MovieLabs '' Next ကိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများဗီဒီယို '' နှင့်အတူလိုက်နာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ကုန်များနှင့် '' Enhanced အကြောင်းအရာကာကွယ်စောင့်ရှောက် '' သတ်မှတ်ချက်များ, အပျပိုငျခှငျ့ကနေလာမယ့် ဟောလိဝုဒ် ပရီမီယံအကြောင်းအရာပို့ဘို့ protocols များသတ်မှတ်ကြောင်းစတူဒီယို "အဲရစ် Gallier, ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, စျေးကွက်, သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်ကဆိုသည်။ "chili အဆိုပါ Vibe VS7000 လိုက်နာဘို့တည်ကြောင်း သိ. ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိနိုင်ပါသည် HDစမတ်တီဗီကနေ Macs မှ PC များမှမိုဘိုင်းဖုန်းများအားလုံးထုံးစံမှမဆိုမျက်နှာပြင်ဖြန့်ဝေ + ။ အဆိုပါ Movielabs သတ်မှတ်ချက်များ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, ထို NexGuard ရေမှတ်အစိတ်အပိုင်းက၎င်း၏အကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေး၏အဖိုးတန်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ငရုတ်သီးနိုင်ပါတယ်။ "
အဆိုပါ Vibe VS7000, MediaFlexOS နှင့်အခြားသွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.thomson-networks.com.
ငရုတ်သီး၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြန့်ဖြူး၏ဦးဆောင်လွတ်လပ်သောအီတလီပံ့ပိုးပေးဖြစ်ပါတယ် HDကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 250 စားသုံးသူကျော်မှတစ်နှစ်လျှင် 460,000 သစ်ကိုဖြန့်ချိကျော်အပါအဝင် + ရုပ်ရှင်နှင့်တီဗီစီးရီး, ။ အဆိုပါငရုတ်သီးပလက်ဖောင်းစမတ်တီဗီ, PC များ, Macs နှင့်ထိုကဲ့သို့သော Tablet နှင့်စမတ်ဖုန်းများအဖြစ်အားလုံးမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်အပါအဝင်အားလုံးအင်တာနက်ကို-connected devices များပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ငရုတ်သီးအဘယ်သူမျှမကိုလစဉ်ကြေးရှိပါတယ်နှင့်၎င်း၏ client များရုပ်ရှင်ခံစားရန်ခွင့်ပြုနှင့်တီဗီအွန်လိုင်း streaming များမှတဆင့်လည်းရသောအခါအော့ဖ်လိုင်းဒေါင်းလုပ်ခြင်းဖြင့်ပြပါ။ အီတလီနိုင်ငံ, ငရုတ်သီးအော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်များ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်အဖွဲ့ချုပ်မှအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး, မာလ်တီမီဒီယာ အကြောင်းအရာဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာကွယ်ပေးသည်ရာ (FAPAV), မူပိုင်ခွင့်နှင့်အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်ကဏ္ဍ၏အပေါငျးတို့သဒေသများ၎င်း၏အပေါင်းအသင်းများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသေချာ, အော်ဒီယိုပုံရိပ်ယောင်အကျင့်ကိုကျင့်၏ပင်လယ်ဓားပြမှုပုံစံအားလုံးကိုတန်ပြန်ရန်နှင့်ဆက်စပ်သောအခွင့်အရေးများ။
NexGuard တစ် Civolution ကုမ္ပဏီနှင့်တရားမဝင်ပြန်လည်ခွဲဝေမှုဆန့်ကျင်မီဒီယာအကြောင်းအရာကာကွယ်ဘို့မှုခင်းရေမှတ်နည်းပညာနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေးသည်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/ThomsonVN/ThomsonVN-ViBEVS7000MultiscreenVideoSystem.png
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Vibe (R) VS7000 Multi-Screen ကိုနှင့် HEVC ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ
4K ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ငရုတ်သီး သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် VS7000 ¢ViBEâ " ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-05-29
ယခင်: Telemundo 2015 - ကုန်စည်ပြပွဲ, Cine, ဗီဒီယိုနှင့် Riedel ဆက်သွယ်ရေးများအတွက်ရုပ်မြင်သံကြား Show ကိုကုန်ပစ္စည်းကို Preview
နောက်တစ်ခု: AVIWEST ​​ဒစ်ဂျစ်တယ်မိုဘိုင်း Newsgathering ဖြေရှင်းချက်နဲ့အတူ Mayweather vs. Pacquiao ၏ TV5 တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့ HD ကို Pre-လွှမ်းခြုံ